........HIGH WAY UP !: The Greatest Scientist of All Time
ဒီနေ.ကျွန်တော်မနက်အစောဆုံး class သွားတက်တယ်။ ကျွန်တော်အရမ်းအားကျတဲ.ဆရာပေါ.ဗျာ..
သူပြောလေ.ရှိတဲ. My major contribution in this field is ...... ဆိုတာ..
ဘ၀မှာကျွန်တော်အပြောချင်ဆုံးစကားတစ်ခွန်းပေါ. ။ (လူကသာဘာမှမဟုတ်တာ....)
ကျွန်တော်နဲ.မျက်မှန်းတန်းမိနေတော.တော်တော်အမေးခံရတယ်..ဆရာ.ကိုကြည်.လိုက်ရင်လဲ..အမြဲတမ်း smart ကျနေတာပဲ...ကျွန်တော်လည်းဘယ်ရမလဲ..မြန်မာလေ..မြန်မာ..အခွင်.အရေးရတာနဲ.ဆရာနဲ.ဓါတ်ပုံတစ်ပုံရအောင်ရိုက်လိုက်တယ်..။
ဒီနေ.စာသင်ရင်းနဲ.ဆရာမေးခွန်းတစ်ခုကောက်မေးတယ်...ထောင်စုနှစ်ရဲ.အကျော်ကြားဆုံး equation ကဘာလဲတဲ. ။ဘယ်သူဖြေမလဲစောင်.ကြည်.နေလိုက်တယ်..ဘယ်သူမှမဖြေဘူး...ဒီတော.မှကျွန်တော်လည်းဖြေပေးလိုက်တယ်..
E = mc^2 လို. ။ ဆရာပြုံးပြီးကြည်.နေတယ်..ကျွန်တော်သိလိုက်တယ်...ဒီ Equation ကိုမေးမှတော. နောက်ထပ်ဘာမေးခွန်းမေးမလဲဆိုတာကြိုသိပြီးသားလေ...ထင်တဲ.အတိုင်းပဲ...ဆရာက “ c ” ကဘာလဲတဲ. ။ speed of light လို.ကျွန်တော်ဖြေပေးလိုက်တယ်...ဘယ်လောက်မြန်လဲတဲ. ။ တစ်စက္ကန်.ကိုကီလိုမီတာ သုံးသိန်း ( ၁၈၆၀၀၀မိုင် ) ဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်...နောက်..အိုင်းစတိုင်းရဲ. speical relativity နဲ. general relativity အကြောင်း..ဆရာနဲ.ဆက်ပြီးကျွန်တော်ဆွေးနွေးဖြစ်တယ်... သူဒီစာအုပ်ဖတ်တာသိပ်နားမလည်ဘူး ဆိုတော.ကျွန်တော်လည်းနားမလည်ကြောင်းပြောလိုက်တယ်..ဒီ theory ထွက်ခါစတုန်းက..ကမ္ဘာပေါ်မှာ ၂ ဦး ၃ ဦး ပဲနားလည်ကြောင်းဖတ်ဖူးပါတယ်ဆိုတော.သူကဟုတ်မှန်ကြောင်းထောက်ခံတယ်..ပြီးတော.ဆရာက..
ဒီမှာသူက Four dimension အကြောင်းပြောတယ်...အဲဒီမှာကျွန်တော် ဆရာ GUT မှာ ten dimension သုံးထားကြောင်းဆက်ပြောမယ်ထင်နေတာ….။
အလိုလိုပြောပြီးသားဖြစ်တတ်ပါလား..လို. ။ဒီလိုနဲ.ပဲဒီညတော.နားမယ်ဆိုပြီး ၁၁နာရီလောက်ကိုယ်.အခန်းကိုပြန်ခဲ.တယ်..။ဘာရယ်မဟုတ်ဟိုဟိုဒီဒီတွေးရင်းနဲ.မနက်ကအကြောင်း
ပြန်ရောက်သွားတယ်.....။ထောင်စုနှစ်ရဲ.သိပ္ပံပညာရှင်အိုင်းစတိုင်းပေါ.။သူ.ရဲ.စွမ်းဆောင်နိုင်မှုတွေ၊ ကမ္ဘာစစ်အတွင်းတုန်းကသူဒုက္ခရောက်ခဲ.တာတွေ၊ ပြီးအမေရိကန်ကိုရောက်..သူ.ရဲ.ဒီ Equation ကြောင်.nuclearတွေ ပေါ်ပေါက်လာတဲ.အကြောင်း.. ပုလဲဆိပ်ကမ်းကိုဂျပန်က ဗုံးကြဲတော. အမေရိကန်က အဏုမြူဗုံး ၂ လုံး ကြဲခဲ.တဲ.အကြောင်း….ဟီရိုးရှီးမားမှာ.. ၈ သောင်းခန်.နဲ. နာဂါဆကီမှာ..၇သောင်းခွဲခန်.သေကြေပျက်စီးတဲ.အပြင်နောက်ဆက်တွဲဆိုးကြိုးတွေပါ..ခံရတဲ.အကြောင်း..
ဒီဗုံးကြဲခဲ.တဲ. Pilots တွေဟာ သူတို.ကြဲလိုက်တာဟာ အဏုမြူဗုံးဆိုတာကို..ဗုံးကွဲလို. မှိုပွင်.သဏ္ဍကြီးတွေမြင်လိုက်ရမှ..သိလိုက်ရတဲ.အကြောင်းလေးတွေကိုပြန်တွေးနေမိတယ်..။
ဒီမှာသူ.ရဲ. equation ကိုလည်းကြည်.ဦး..။ E = mc^2 : m ဆိုတာဒြပ်ထု..c က အလင်းရဲ.အလျင်.. E ကစွမ်းအင်..။ဒါဆိုဒြပ်ထုသေးသေးလေးကအင်မတန်ကြီးမားတဲ.စွမ်းအင်ကိုထုတ်ပေးနိုင်တယ်လို.
ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်..။တကယ်.ကိုမယုံကြည်နိုင်စရာပါပဲ..။ c = 186000 ကို နှစ်ထပ်ကိန်းတင်ကြည်. နည်းနည်းနောနောစွမ်းအင်မဟုတ်ဘူး..ထောင်စုနှစ်ရဲ.သိပ္ပံပညာရှင်ဖြစ်ထိုက်ပါပေတယ်....။
အဲဒီမှာဆိုမြေအောက်ရေဟာ ဒီဖြစ်စဉ်ကိုထိန်းချုပ်ပေးထားတဲ. moderator ပဲ..။ ဒီလိုထိန်းချုပ်တဲ.နည်းလမ်းကိုကျွန်တော်တို. လူတွေကရအောင်ရှာပြီး
အရင်တုန်းက..Fission လို.ခေါ်တဲ.ဖြိုခွဲခြင်းနဲ.ဖန်တီးတာ..။ခုဆို Fusionလို.ခေါ်တဲ.ပေါင်းစည်းခြင်းနဲ.ဖန်တီးယူတာဗျ...အရင်ကကောင်တွေထက်ပိုပြင်းတယ်...။
ဒီလိုအလင်းရဲ.အလျင်နဲ.ဖြစ်ပျက်တဲ.အရာကိုထိန်းချုပ်နိုင်တော.ဒီလိုတွေဖြစ်လာတယ်....။ ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို.ဘုရားဟောခဲ.တာက..အမြန်တကာ.အမြန်ဆုံးဟာလူ.ရဲ.စိတ်ပါ..။ ဘုရားရဲ.အဆုံးအမတွေကျင်.စဉ်တွေဟာဒီမြန်လှတဲ.စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ဖို.ပါ..။ဒါဆို..
အခြေခံအားလေးမျိုးရှိတယ်...ဒြပ်ဆွဲအား၊လျပ်စစ်သံလိုက်အား၊နျူကလီးယားအားပျော.နဲ. နျူကလီးယားအားပြင်း ရယ်ဆိုပြီးတော. ….ကျွန်တော်တို.ဗုဒ္ဓဘာသာမှာတော.အရာအားလုံးကိုမြေ၊ရေ၊လေ၊မီးဆိုတဲ.ဓါတ်ကြီးလေးပါးနဲ. ဖွဲ.စည်းထားတယ်။GUT လို.ခေါ်တဲ. grand unified theoryမှာတော. ဒီအားလေးမျိုးကို ပေါင်းစပ်ဖို.အတွက် သိပ္ပံပညာရှင်တွေ ကြိုးပမ်းကြတယ်...။ဒီစာအုပ်ဖတ်တုန်းကဆို.. စဖတ်ကထဲက..ဒါဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို.ကျွန်တော.စိတ်ထဲမှာတွေးလိုက်မိတယ်....။
ဘာဖြစ်လို.လဲဆိုတော. ဒီအားလေးမျိုးဟာ ကျွန်တော်တို.ဗုဒ္ဓဘုရားသခင်ရဲ.ဓါတ်ကြီးလေးပါးနဲ.တူတူပဲဖြစ်မယ်လို.ကျွန်တော်စတွေးမိတယ်..။
ထင်တဲ.အတိုင်းပဲ..နယူတန်ကြီးရှုံးရော..။ပြီး black hole တွေအကြောင်းဆက်စဉ်းစားမိပြန်တယ်...။
ဒီတွင်းနက်တွေဟာ ..စင်္ကြာဝဋ္ဌာတစ်ခုနဲ.တစ်ခုကိုပိုင်းခြားထားတာဖြစ်တယ်လို.သိပ္ပံပညာရှင်တွေကယူဆကြတယ်..။ ဒီမှာ..ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓရဲ.စင်္ကြာဝဋ္ဌာအနန္တဆိုတာကို..သွားပြီးသတိရမိတယ်..
ဟုတ်တယ်..ဒါဖြစ်သင်.တယ်..။တကယ်လို.သာတစ်ချိန်ချိန်မှာ Proof ကောင်းကောင်းပြနိုင်ရင်ဒီကိစ္စဖြစ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိတယ်..ကဲ..ခုတော.အိပ်သင်.ပြီ..အိပ်တော.မယ်ဆိုပြီး
ကျွန်တော်ကုတင်ပေါ်တက်ပြီးမြန်မာပြည်ကသယ်လာတဲ.ပဏ္ဍိတဝေဒနိယဒီပနီကျမ်းကို ကောက်လှန်လိုက်တယ်... ဘုရားသခင်ဟောထားတဲ.ကမ္ဘာမြေဖန်ဆင်းတဲ.အပိုင်းကိုလှန်မိလျက်သား ။
ဒီလိုနဲ.မျက်လုံးစင်းလာတော.စာအုပ်ကိုဘေးချအိပ်ဖို.ပြင်လိုက်တယ်..အတွေးမှာအမေ.ရဲ. မျက်နှာပေါ်လာတယ်.....ငယ်ငယ်ကဆိုစာအုပ်ကိုကုတင်ပေါ်တင်ပြီးအိပ်လို.အမေကျွန်တော.ကို အမြဲဆူတယ်လေ...။
မောင်ဒီ၏ကြောင်စီစီနေ.ရက်များ..(October 11 2008)